अरुसंग नसल्कियोस भनेर बुढीले आफ्नै बुढाको पाइन्टमा ताला ठोकेपछि…. – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनअरुसंग नसल्कियोस भनेर बुढीले आफ्नै बुढाको पाइन्टमा ताला ठोकेपछि….
अरुसंग नसल्कियोस भनेर बुढीले आफ्नै बुढाको पाइन्टमा ताला ठोकेपछि….
February 5, 2021 admin मनोरंजन 7907
अविश्वासले मान्छेलाई कुन अवस्थासम्म पूराउँछ भन्ने कुराको उदाहरण पेश गरेका छन् ।आफ्नी बुढीले अरुसँग ल’सप’स गर्छ भन्ने आशंकामा आफ्नै बुढाको पाइन्टमा ताल्चा लगाईदिए पछि बुढाले उ’जुरी गरे । आफुभन्दा निकै कम उमेरका बुढा अरु केटिसँग बरालिने शं’का गर्दै ती महिलाले पाइन्टमा ताला ठो’केकि बताएकि छिन। यस्तो मुर्ख्याइँ गर्ने मानिस नेपालका भने होइनन् ।
मेक्सिकोका एक ४० वर्षे बुढीले आफ्नी २९ वर्षे बुढाको पाइन्टमा ताला लगाइदिएको घ’टना र्सार्वजनिक भएको छ । आफ्नो पाइन्टमा बुढीले ताला लगाइदिँदा आफु दिनमा घण्टौँ सम्म पाइखाना समेत जान नपाएको भन्दै ती युवा प्रहरी समक्ष पुगेपछि यो घ’टनाको पर्दाफास भएको हो । तर ती युवतीले अब आफुले बुढाको पाइन्टमा ताल्चा नलगाउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
उसको उपस्थितिमा उसैले ताला खोलिदिएर आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने र त्यहीँ बेला मात्र आफु ट्वाइलेट जान पाउने अन्यथा बुढी बाहिर गएको बेलामा आफु ट्वाइलेट सम्म जान नपाउने उनको दु’खेसो थियो । बुढीको ड’रले आफुले आफै ताला तो’ड्ने हिम्मत पनि नगरेको उनले बताइन् युवतीको उ’जुरीपछि प्रहरीले ती युवतीलाई प’क्राउ गरेको छ ।
उनले प्रहरीलाई बुढाको पाइन्टमा लगाएको ताल्चाको साँचो दिएपछि प्रहरीले ताला खोलिदिएको थियो । प्रहरीले ती युवतीवि’रुद्ध दुराचारको अ’भियोगमा मु’द्दा चलाउने प्रयास गरेपछि युवकले जाहेरी दिन अस्विकार गरेपछि उनीमाथि मु’द्दा चलेन र केही घण्टामै हि’रासतमुक्त गरियो ।
श्री’मतिको चा’हना पूरा गर्न नसकेर सा’थी बोलाउन थालेपछि भयो सोच्नै न’सक्ने घ’टना…
सम्बन्ध जोड्ने वा टुक्राउने घरलाई स्वर्ग वा शंकाको थलो बलाउँने सबै नारीको हात
April 26, 2021 admin मनोरंजन 1277
एउटी नारीको इज्जत अर्की नारीमाथि भर पर्छ । उसले हेर्ने नजर र उसले गर्ने व्यावहार माथि भर पर्छ । पुरुषलाई दोषलागाउनु त त्यो हाम्रो सोच मात्र हो । पुरुषलाई त एक नारीले अर्को नारीलाई गलत
November 21, 2020 admin मनोरंजन 6928
November 27, 2020 admin मनोरंजन 6868
काठमाडौं । बिहीबार बिहान त्रिशुलीमा भएको जिप दुर्घटनामा परी हराइरहेकी ११ वर्षीया बालिका जेनिसा रोका अझै फेला परेकी छैनन् । जेनिसाको सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले खोजी कार्य जारी राखेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता